दुश्मनको क्रियाकलापहरू नष्ट गर्न प्रार्थना पोइन्टहरू प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना प्रार्थना बिन्दु दुश्मन को गतिविधिहरु को नष्ट गर्न को लागी
काम :5:१२: उनले धूर्त उपकरणहरू निराश गरे, ताकि उनीहरूका हातहरूले तिनीहरूको उद्यम गर्न सक्दैनन्
बाइबलले बताउँछ कि शत्रु रातदिन होइन, कसलाई नष्ट गर्ने कोशिस गरिरहेको थियो। त्यसैले यो उचित छ कि दुश्मनको क्रियाकलापको बिरूद्ध प्रार्थना गम्भीरतासाथ लिन्छ। धर्मशास्त्रले हामीलाई बुझाउन लगायो कि शैतान चोर्न, मार्न र ध्वंस नगरी आउँदैन, यूहन्ना १०:१०। यो बाइबल को पद दुश्मनहरूका कामहरू विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछ। आज हामी शत्रुको क्रियाकलापलाई नष्ट गर्न शक्तिशाली प्रार्थना बिन्दुहरू हेर्नेछौं। यो प्रार्थना पोइन्टहरू तपाईंको घरको अँध्यारोमा भएका सबै खराब गतिविधिहरू आगोले बग्ने छ। तिनीहरूलाई विश्वासको साथ आज प्रार्थना गर्नुहोस् र तपाईंको हातमा तपाईंको जीवनमा परमेश्वरको हात रहेको कुरा हेर्नुहोस्।
जब मानिसहरू राती निदाउँछन्, तपाईंलाई चासो लाग्नेछ कि सयौं मानिसहरू निद्रामा छैनन्, तिनीहरू एक चीज वा अन्य गरिरहेछन् ताकि अन्य व्यक्तिको गन्तव्यलाई बाधा पुर्याउन वा नष्ट गर्न। कसैले सोच्न थाल्छ कि खराबी गर्न शत्रुले के गर्छ? वा कसैले यस्तो सोच्न थाल्छ कि किन पृथ्वी यति धेरै दुष्टले भरिएको छ, के मानिसहरू प्रेम र शान्तिमा एकसाथ बस्न सक्दैनन्? ठिकै हो, यो सिंहलाई मान्छे नखोज्नु भनेको आशा गर्नु हो किनकि मानिसले सिंह खाँदैन। यो खराब गर्न दुश्मनको प्रकृतिमा छ, तिनीहरू स्वाभाविक रूपले मानिसहरुलाई नष्ट गर्ने खराब योजनाको साथ डिजाइन गरिएको हो। तसर्थ, इसाईहरूले उनीहरूका खराब क्रियाकलापबाट भाग्न पाउनु हाम्रो आफ्नै पूर्ववत कार्य हुनेछ।
मोर्दकै र हामानको जीवन एक व्यक्ति माथि शत्रुको असफल प्रयासको राम्रो उदाहरण हो। हामानले मोर्दकैलाई विनाकारण मृत्युदण्ड दिने योजना गरेका थिए। मोर्दकैले त्यस्तो घृणाको लागि हामानलाई कुनै नराम्रो काम गरेनन, मोर्दकैलाई कुनै कारण बिना नै घृणा गरे। त्यसोभए, उसले मोर्दकैलाई राजाले मार्ने योजना बनायो तर धर्मशास्त्रले भन्छ कि धर्मीहरूको प्रार्थनाले ठूलो लाभ उठाउन सक्छ। प्रार्थना र अन्तरबिन्तीबाट हामान मोर्दकैको ठाउँमा मरे, उनी मोर्दकैको लागि बनाएको विषाक्त विषले मारे। आज तपाईंले यो प्रार्थनामा स points्लग्न गर्दै, तपाईंको सबै खराब योजनाहरू शत्रुहरू येशू ख्रीष्टको नाममा उनीहरूको अनुहार पछाडि फर्कनेछ।
साथै, यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि गैर-इकाईमा शत्रु हुँदैन। कुनै मानिस जो विनाश र विपत्तिको लागि निश्चित छ उसको कुनै शत्रु हुने छैन। जे होस्, कुनै पनि व्यक्ति जो महानताको लागि निर्धारण गरिएको छ पक्कै शत्रुहरू हुनेछन्। यो एक कारण यो छ जब हामी सँधै विश्वासका साथ रहनुपर्दछ जब संकष्ट र समस्याहरू हाम्रो बिरूद्ध खडा हुन्छन्, हामीलाई थाहा हुनुपर्दछ कि हामी महान हुनेछौं। हाम्रो विश्वासका लेखक येशू ख्रीष्ट, उहाँ नम्रताका बावजुद स्वतन्त्र मनोभाव र धार्मिक स्वभावको बाबजुद पनि उहाँसित धेरै शत्रुहरू थिए। शैतानले ख्रीष्टका कामहरूलाई बिगार गर्ने सब भन्दा ठूलो शत्रु हो किनकि शैतानलाई थाहा छ कि ख्रीष्ट मानिसहरुको मुक्ति र उसको विनाशको लागि आउनुभएको हो। त्यसोभए, शत्रुहरू सँधै उठ्न सक्दछन् विशेष गरी जब हामी सफलताको साथ अगाडि बढिरहेका छौं।
हामीले हाम्रो जीवनमा दुश्मनको गतिविधिहरू नष्ट गर्न प्रार्थना पोइन्टहरूको एक सूची संकलित गरेका छौं। यी प्रार्थना पोइन्टहरूले तपाईंको जीवन र गन्तव्य बिरूद्ध लक्षित शैतानको सबै खराब योजनाहरू नष्ट गर्दछ। तपाईंको विरूद्ध जम्मा भएपछि, यी प्रार्थनाहरूले तिनीहरूलाई तितरबितर पार्नेछ। यी प्रार्थना बिन्दुहरूमा संलग्न हुनुभएपछि, तपाईंको दुश्मनहरूका सबै दुष्ट योजनाहरूदेखि तपाईं जोगाउनका लागि एन्जिलका दूतहरू तपाईंलाई पठाइने छन्। प्रत्येक खाडलमा तपाईंको लागि खन्न, ती सबै येशू ख्रीष्टको नाममा खस्नेछन्।
• स्वर्गीय पिता, म आज तपाईंहरू समक्ष आउँदैछु, त्यहाँ शत्रुले एउटा फौजले मलाई पक्रन खोजिरहेको छ, हे प्रभु, म तपाईंसँग बिन्ती गर्दछु कि तपाईंले येशूको नाममा भएको मेरो सल्लाहलाई नष्ट गर्नुहोस्।
• हे प्रभु, तपाईंको वचनले भनेका छन्, प्रभुको आँखा सधैं धर्मीमाथि हुन्छ, र उहाँका कानहरू उनीहरूको प्रार्थनामा सँधै ध्यान दिन्छन्, म येशूको नाममा तपाईंको सुरक्षामा छु।
Ly स्वर्गीय ईश्वर, मेरो जीवन चाहने मानिस दिनदिनै बढ्दै जान्छ, तर म तपाईंको वचनमा शरण लिन्छु कि मेरा विरुद्धमा कुनै हतियार फेसन सफल हुँदैन, म मेरा शत्रुहरूको छाउनीमा आगो लगाउँछु।
• हे प्रभु, म बिन्ती गर्दछु कि न्यायको दिनमा मेरो विरुद्धमा उठ्ने हरेक जिब्रोलाई येशूको नाममा दोषी ठहराइनेछ। बाइबल भन्छ, मँ ख्रीष्टको छाप बोक्छु, कसैले मलाई त्रास नदेऊ, म सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको आगोलाई मेरा सबै शत्रुहरूमाथि येशूको नाममा पठाउँछु।
Your प्रभु, तपाईंको कृपाद्वारा म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले ममाथि शत्रुको सबै आक्रमणहरू विफल पारिदिनुहुनेछ र तपाईंले येशूको नाममा उनीहरूलाई शर्ममा पार्नुहुनेछ।
He हे स्वर्गका परमेश्वर, धर्मशास्त्रले हामीलाई बुझाउँछ कि तपाईं बदलाको परमेश्वर हुनुहुन्छ, म तपाईंलाई भन्छु कि तपाईं आफ्नो क्रोधमा खडा हुनुहुनेछ र येशूको नाममा मेरा सबै शत्रुहरू विरूद्ध बदला लिनुहोस्।
• ओह! इस्राएलको कुनै पवित्र जनले बोलेको छैन भने कसले भन्छ? म मेरो, मेरो परिवार र येशूको नाममा साथीहरू विरुद्ध झगडा गर्ने हरेक जिब्रोको विरूद्ध आउँछु।
• तपाईंले आफ्नो वचनमा यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि मेरो आँखाले म दुष्टको इनाम देख्नेछु र मलाई कुनै हानि हुनेछैन वा मेरो वासस्थानको नजिक आउनेछैन, प्रभु यस वर्ष म उनीहरूको प्रत्येक क्रियाकलापको बिरूद्ध आउँछु। येशूको नाममा।
Lord प्रभु उठ्नुहोस् र तिम्रा शत्रुहरू तितरबितर होऊन्, तिम्रा मानिसहरूलाई डाह गर्नेहरू र घृणा गर्नेहरू नष्ट होऊन्, जसरी भट्टीको अनुहारमा तरवारले पग्लन्छ, येशूको नाममा दुष्टहरू पनि नष्ट होऊन्।
• म तपाईंलाई भन्छु कि तपाईं आगोको तरवारले सेराफिमको तल झर्नुहुनेछ र तिनीहरूले मेरो सुरक्षाको जिम्मा लिनेछन्, सेराफिम जसले सर्वशक्तिमान ईश्वरको बदला लिने तरवार बोक्दछ, म तपाईंलाई बिन्ती गर्दछु कि तपाईं तिनीहरूलाई येशूको नाममा पठाउनुहुनेछ।
It किनकि यो लेखिएको छ, मलाई थाहा छ कि म तपाईको बारेमा मेरा विचारहरु हुन्, ती राम्रो विचारहरु हुन् न बुराउने को लागी तपाईलाई अपेक्षित अन्त प्रदान गर्न। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु कि आजको जस्तो तपाईको सल्लाह मात्र हो। येशूको शक्तिशाली नाम मा मेरो जीवन मा खडा हुनेछ।
• प्रभु, म बुझ्छु कि तपाईं पापीहरूको मृत्यु चाहानुहुन्छ तर उनीहरू येशू ख्रीष्टमार्फत पश्चाताप गर्नुहुन्छ। म प्रार्थना गर्छु कि तपाईंको दयाले मेरो पतन खोज्नेहरूको हृदय बदल्नेछ, म तपाईंलाई येशूका नाममा मेरो बिचार बदल्न आग्रह गर्दछु।
• तपाईंले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको थियो कि तपाईंले मलाई सराप दिनेहरूलाई सराप दिनुहुनेछ र मलाई आशिष् दिनेहरूलाई आशिष्‌ दिनुहुनेछ। र तपाईंको वचनले मलाई यो पनि बुझाउँदछ कि तपाईं एक्लै खराबलाई भलामा बदल्न सक्नुहुन्छ। येशूको नाममा, म तिनीहरूको खराब योजनाहरू र मेरो जीवनको एजेन्डालाई येशूको नाममा राम्रो सफलतामा परिवर्तन गर्दछु।
You जवाफ दिईएकोमा तपाईले छुटकारा दिनुहुनेलाई धन्यबाद दिनुहुन्छ, धन्यवाद किनभने तपाई मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाई बाहेक अरू कुनै ईश्वर छैन, उत्तरका लागि धन्यबाद, धन्यबाद किनभने तपाईले मेरो शत्रुको शिविरमा एउटा ठूलो अशान्ति पैदा गर्नुभयो, तपाईले भन्दा मलाई खराब चाहान्ने सबैलाई ठूलो दुःखको कारण छ, तपाईंको सुरक्षाको लागि धन्य उद्धारकलाई धन्यबाद दिनुहोस्, येशूको नाममा म प्रार्थना गर्दछु।
अघिल्लो लेखमाखराबी विरुद्ध सुरक्षाको लागि प्रार्थना
अर्को लेखमाटूटेको सम्बन्धको लागि प्रार्थना
लिसा जून २,, २०१7साँझ :2020: १। बजे
कृपया मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहोस् कि मेरा सबै दुश्मनहरू म र मेरो परिवार र साथीहरू बिरूद्ध योजना बनाउँदछन्, असफल हुने थिए। मसँग धेरै शत्रुहरू छन्। किनकी मैले खराबीको बिरूद्ध अडान लिएँ। फेरि पनि सावधान र सतर्क रहनुहोस् प्रार्थना गर्न। धन्यवाद।
परमेश्वरले सुन्नुभयो, चिन्ता नगर्नुहोस्, केवल जीवित परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको सामर्थी नाममा उहाँको भलाइको निम्ति पर्खनुहोस्।
टोमी अगस्त,, २०१ At बिहान :29::2020 बिहान
यो प्रार्थना पोस्ट गर्नु भएकोमा धन्यवाद Job:१२ किनकि हाम्रा शत्रुहरू यस समयमा हाम्रो जीवनलाई नष्ट गर्ने प्रयास गर्दै थिए र कुन प्रार्थना प्रार्थना गर्ने भनेर मलाई थाहा थिएन र अय्यूब :5:१२ को हरेक शब्दले मेरो हृदयभित्र प्रवेश गरेको छ र मलाई सुरक्षित महसुस गराउँदैछ। परमेश्वर र येशू ख्रीष्टको हात। धन्यबाद; बिहान ११ बजे यसले मलाई शान्तिमय जीवनमा शान्ति प्रदान गरेको छ हामी यी व्यक्तिहरूसँग बाँचिरहेका छौं।
आशिकोटो जनवरी १०, २०२० बिहान :17: 2021
कृपया मलाई मेरो स्कूलको लागि पैसा कमाउनको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् किनकि यसले मलाई धेरै चोट पुर्याइरहेको छ र धेरै चिन्ताहरू ल्यायो। म आफ्नो स्कूल समाप्त गर्न चाहन्छु तर म आर्थिक स्थिर छैन। मलाई मद्दत गर्नुहोस् नासरीथ आमेनका स्वामी
धैर्यता जनवरी १०, २०२० बिहान :19: 2021
साहसी र प्रेरणादायक प्रार्थना पोइन्टहरू
नर्स4लाइफ मार्च,, २०२० साँझ :1::2021
मेरो जीवनको एकदमै आवश्यक समयको लागि र तपाईंको सबै प्रार्थनाहरूको लागि धन्यवाद।
मेरी स्मिथ मार्च,, २०२० साँझ :14::2021
कृपया मेरो विवाहको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् जुनसुकै प्रयास गरे पनि मेरो पतिले बहस सुरु गर्नमा गल्ती भेट्टाउँछन् र आफैलाई मबाट अलग गर्नुहोस्।
भविष्यवक्ता कोलिन्स अप्रिल १,, २०२० बिहान :9:१
कृपया तपाईको लोग्नेको नाम के हो
आरती यादव मार्च 15, 20219मा: 33 बिहान
कृपया मेरो व्यवसाय र व्यक्तिगत चुनौतिहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। अन्तर्दृष्टि साझेदारीको लागि धन्यवाद।
म यशैया declare० लाई तपाईंको व्यवसायमा घोषणा गर्दछु
ताई-अकवाडा इमानुएल अप्रिल २,, २०१ At अपराह्न २::27
यी प्रार्थना बिन्दुहरू वास्तवमै शक्तिशाली र समय हो
म एक जना विद्यार्थी हुँ जसले भर्खर घानाका तृतीयक संस्थाहरूमा प्रवेश पाएको छ, म छुट्टीको लागि घर फर्कें र केही कुरा भयो जुन बुझ्न मलाई गाह्रो भयो। मैले मेरो मोजा र रुमाल सुकाएँ र यसलाई अज्ञात व्यक्तिले लगे। मेरा बुबाआमासँग र हामी घरमा केवल3छौं, विनाश भएको छ कृपया मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
लिंडा मे,, २०१ 20::2021१ अपराह्न
कृपया मेरो परिवार को लागी प्रार्थना गर्नुहोस्। हाम्रा शत्रुहरूले हामीमा शान्ति ल्याउन सक्दैनन्। तिनीहरूले हामीलाई मार्ने धम्की दिन्छन्। हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
Olanike ओनी मे,, २०१ 24::2021१ अपराह्न
धन्यवाद सर, मैले आशिष् पाएको छु, बुँदाहरू निकै सहयोगी छ। भगवानले तपाईंको अभिषेक बढाउनुभयो।
केन्या जुन 7, 2021 11 मा: 33 बिहान
Dios bendiga sus vidas! Y लॉस गार्ड डे लॉस प्लेन्स डेल मालिग्नो। डेस्डे भेनेजुएला!
लिंडा जुलाई,, २०२० बिहान १०::13 बिहान
धन्यवाद धेरै पास्टर त्यहाँ धर्मशास्त्रको साथ प्रार्थना जस्तै केहि छैन
म परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्ने सबैलाई मन पराउँछु।
किनभने उहाँ एक मात्र मार्ग हुनुहुन्छ।
क्यारोलिन Kawira Mbogo जुलाई १, २०१ 29 साँझ :2021::12 बजे
यो प्रार्थना को लागी फर लाई धन्यवाद। मसँग धेरै दुश्मनहरु छन् जो टाढा जान्दैनन् चाहे जति म प्रार्थना गर्छु .. म जन्मे पछि। लडिरहेको छु। दानव उत्पीडित र सम्पत्ति। महिला मेरो कपाल चढाउँदै। सपनामा खाना .. उड्न को लागी सपना .. फोहोर पानी मा खस्ने .. मेरो कक्षा कोठा मा फर्कने .. वर्दी लगाएर। मानिसहरु मेरो पछि लाग्छन्। म भगवान को अनुग्रह बाट एक जीवित छु .. किनकि tnis समुद्री राक्षसहरु मलाई मार्न कोसिस गरीरहेछन् तर कुनै बेकार संग .. अब उनीहरु मेरो जीवन मा सबै चीज चोरी गरीरहेछन्। म विवाहित छैन। र म ४० छु कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस् ... पीडित छु। मेरो आत्मालाई ईश्वरीय हस्तक्षेप चाहिन्छ? क्यारो